Afarta beddel ee ugu wanaagsan ee Gmail loogu talagalay Android | Androidsis
Gmail waa barnaamijka ugu isticmaalka badan e-maylka Android. Gaar ahaan ka dib markii lagu dhawaaqay in Google uu joojin doono taageerida Inbox dhowr bilood gudahood. Nasiib wanaag, waxaa jira codsiyo badan oo emayl ah oo loo heli karo dadka isticmaala taleefanka gacanta. Sidaa darteed, haddii aad raadineysay xulashooyin qaar, waxaad ka heli kartaa xulashooyin badan oo wanaagsan Dukaanka Play-ka, kuwaas oo la hubo inay dan weyn leeyihiin.
In kasta oo Gmail ay tahay ikhtiyaar wanaagsan, haddana way u oggolaataa qaar siyaabaha loo habeeyo, waxaa jira isticmaaleyaal raadinaya wax ka duwan. Xaaladaha noocaas ah, waxaannu hoosta kaaga dhaafi doonnaa qaar beddelaad wanaagsan oo la tixgeliyo. Xaqiiqdii waxaa jira codsi aad kahesho xiiso inaad soo dejiso.
Waxaan ku bilaabaynaa codsigan oo si tartiib tartiib ah farqi ugu dhex helaya dadka isticmaala Android. Waa bedel weyn oo Gmail ah. Waxay u taagan tahay gaar ahaan naqshadeynta, maaddaama ay leedahay interface ah oo aad u fudud in la isticmaalo. Intaas waxaa sii dheer, waxaad haysaa howlo aad u tiro badan oo laga heli karo codsigan. Marka waa suurtagal in wax badan laga soo saaro oo loo habeeyo dhinacyo kala duwan iyada oo aan dhibaato badani ka jirin.
Waxay ku habboon tahay barnaamijyada kale sida Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, iCould iyo Office 365. Markaa waxay kuu oggolaaneysaa inaad si raaxo leh u shaqeyso. Intaa waxaa dheer, si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa. U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash. Ma jiraan wax iibsi ama xayeysiis gudaha ah.
Boosta Buluugga ah - Email & Kalandar
Developer: Shirkadda Blix Inc.
Codsi kale oo waraaqo ah oo sii wadaya helitaanka joogitaanka Android. Waxay suurtogal u tahay ikhtiyaarka aad adigu u habeyn karto inta ugu badan, maadaama aad awoodi doonto la qabsasho ficil ahaan dhammaan isku xirnaanta barnaamijkan dookhaaga ama baahiyahaaga. Wax kuu oggolaan doona inaad wax badan ka hesho isticmaalkaaga. Marka waxaad adeegsan doontaa shaqooyinkaas kuu oggolaanaya inaad ku maamusho boostadaada sida ugu macquulsan. Iskuxirkiisu waa fududahay in la isticmaalo, laga yaabee inuu ka fududyahay Gmail.
Intaa waxaa dheer, waxay la jaan qaadi kartaa codsiyada kale ee boostada sida Gmail, Outlook ama Yahoo. Marka wax dhibaato ah kala kulmi meysid isticmaalkiisa. The degsado codsigan ee Android waa lacag la'aan. Waxaan ka helnaa iibsiyo iyo xayeysiin gudaheeda, si aan u helno howlo dheeri ah.
Aqua Mail: dhakhso badan oo ammaan ah
Codsigani wuxuu leeyahay nashqad aad u xasuusinaysa Inbox, waa sababta a beddel wanaagsan labada Inbox sida Gmail. Faa'iidada weyn iyo astaamaha ugu muhiimsan ee barxadani waa xawaareheeda. Waxay noo oggolaan doontaa inaan sameyno maareyn aad u raaxo leh oo dhakhso leh dhammaan emaylladayada iyada oo aan wax dhibaato ah. Waa inaan ku darnaa xaqiiqda inay leedahay interface aad u fududahay in la isticmaalo. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay tiro badan oo hawlo ah oo la heli karo, taas oo noo oggolaanaysa inaan horumarinno isticmaalkeeda wakhti kasta.
Shaqada ugu muhiimsan ee codsigan ayaa ah in aan leenahay caawiye, kaas oo naga caawin doona inaan sifeyno emayllada ay noo soo diraan. Marka waxay ogaan doontaa farriimaha muhiimka ah oo inta hartay gadaal uga tagaya. Sidan oo kale, waxay noo oggolaan doontaa inaan diirada saarno farriimahaas muhiimka ah. U soo degsashada codsigan loogu talagalay Android waa bilaash, mana jiraan wax iibsi ama xayeysiis gudaha ah.
Iimayl - Laydhka Tooska & Sugnaanta
Developer: Barnaamijka Edison
Codsigan e-maylka ah ee beddelka ah ee loo diro Gmail-ka ee 'Android' ayaa ku guuleystay abaalmarinno hore, iyo sidoo kale qiimeyn aad u wanaagsan oo laga helo dadka isticmaala. Waa ikhtiyaar u taagan dhowr sababood awgood. Dhinaca mid waxaan leenahay interface weyn, taas oo kuu oggolaaneysa inaad hab fudud u abaabusho emaylkaaga. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay baaritaanno caqli-gal ah waxayna sidoo kale la midoobaysaa barnaamijyada kale, sida Pocket, EverNote ama OneNote.
Waxaan fursad u leenahay adeegsiga erayga sirta ah si aan u ilaalino sanduuqa. Sidaas darteed qofna ma awoodi doono inuu akhriyo farriimahayaga ogolaansho la'aan. Marka amniga iyo asturnaantu waa laba dhinac oo xisaabta lagu darsaday. Waxa kaliya ayaa ah in ay tahay barnaamij lacag la bixiyo, oo ay ku baxayso qiyaastii 4 doolar bishii. In kasta oo aad ku samayn karto bilaash muddo 14 maalmood ah, si aad u aragto haddii ay ku qanciso iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Beddelka ugu fiican ee Gmail ee loogu talagalay Android
Redmi Note 7 waxay heli doontaa Habka Muuqaalka Habeenkii ee Xiaomi Mi Mix 3 oo leh cusbooneysiin
DxOMark wuxuu tijaabinayaa Huawei Mate 20 Pro: dhibcaha ayaa ku dhow in la ogaado!